Cali Waal “Jawaab deg deg ah ayaa ka bixin doonnaa weerarkii Al-shabaab “ – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Cali Waal “Jawaab deg deg ah ayaa ka bixin doonnaa weerarkii Al-shabaab “
Wararka aynu ka helayno gobolka Sh/hoose ayaa sheegaya in ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya ay maanta howlgal aan caadi ahayn ka bilaabeen degmada Qoryooley.
Howlgalkaan ayaa la sheegayaa inuu daba socdo weerar maalintii shalay ay degmada Qoryooley kusoo qaadeen dagaalyahannada Al-shabaab, gaar ahaan fariisin ay halkaasi ku lahaayeen ciidanka dowladda Soomaaliya.
Taliyaha saldhigga degmada Qoryooley Cali Maxamed Aadan (Cali Waal) oo la hadlay mid ka mid ah idaacadaha maxaliga ah ayaa u sheegay inay jawaab deg deg ah ka bixin doonnaan weerar maalintii shalay kaga yimid dagaalyahannada Al-shabaab.
Wuxuu taliye Cali Waal sheegay in ciidamada dowladda ay haatan howlgalo baaritaano ah ka wadaan degmada Qoryooley iyo tuulooyin kale oo degmadaasi hoostaga, halkaas oo la sheegay inay ku dhuumaaleysanayaan dagaalyahannada Al-shabaab ee shalay weerarka soo qaaday.
“Jawaab deg deg ah ayaa ka bixin doonnaa weerarkii Al-shabaab oo ay shalay kusoo qaadeen degmada Qoryooley, hadda ciidanka ayaa howlgalo baaritaano ah ka wada degmadaasi iyo tuulooyinka hoostaga” Sidaas waxaa yiri Taliye Cali Waal oo la hadlayay mid ka mid ah idaacadaha magaalada Muqdisho.
Ma ahan markii ugu horeeysay oo ay ciidamada dowladda Soomaaliya howlgalo ceynkaan oo kale ah ka fulliyaan degmada Qoryooley, iyadoona dhowr jeer hore ay weerar kala kulmeen dagaalyahannada Al-shabaab.